Ndị otu UNWTO Executive Council na-akọwara: Akwụkwọ ozi ọhụrụ sitere na Chile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Ndị otu UNWTO Executive Council na-akọwara: Akwụkwọ ozi ọhụrụ sitere na Chile
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Chile • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • trending Ugbu a
Dị ka a tụrụ anya ya na n'aha ndị otu 32 nke Executive Council, Onye isi oche nke UNWTO Executive Council, José Luis Uriarte Campos si Chile kwadoro ndị òtù UNWTO ndụmọdụ nke Council Executive nke zukọrọ na Jenụwarị nke afọ a iji họpụta ọzọ. Mazị Zurab Pololikashvili dị ka odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation maka oge 2022-2025.
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya si Chile bụ ọkaiwu. Dị ka onye isi nke UNWTO Executive Council ugbu a, o mere ihe dị mkpa ụnyahụ. O mere ka o doo anya na Council Executive na-arụ ọrụ n'ime iwu UNWTO mgbe a na-ahọpụta Zurab Pololikasgvili na Jenụwarị. Ndị ọka iwu nwere ike ịgụ n'etiti ahịrị.
Mazị Campos kọwara n'ụzọ ziri ezi na usoro nke Executive Council zutere wee gaa n'ihu dabere na iwu UNWTO, ihe n'ezie ọ nweghị onye jụrụ ajụjụ.
A sị ka e kwuwe, ọ bụghị mmejọ nke UNWTO Executive Council, ma ọ bụrụ na UNWTO General Assembly enweghị ike ịkwado mkpebi ha mere, karịsịa mgbe ọnọdụ gbanwere, na Executive Council amaghị ihe ga-agbanwe n'etiti ụbọchị mkpebi. e mere na a General Assembly.
Enwere ike iche na ihe kpatara inwe ọtụtụ ọnwa n'etiti mkpebi na nkwenye bụ ikwe ka a tụlee mgbanwe mgbanwe.
Ọ bụ ugbu a ka nzukọ General nke World Tourism Organisation (UNWTO) na-abịa n'ime ụbọchị ole na ole na Madrid iji kwado ma ọ bụ kwado nkwenye nke Council Executive site na Jenụwarị afọ a.
Mgbe ị na-ele UNWTO, mgbe ị na-elele odeakwụkwọ ukwu Pololikashvili, na mgbe ị na-elele otú ndị isi Council Council si eche taa, ọ na-eche na anyị nwere ike ịnọ na mbara ala dị iche iche, ma e jiri ya tụnyere ebe anyị nọ na Jenụwarị, ma ọ bụ tupu na September.
Ndị otu 33 nke Executive Council bụ 1. Saudi Arabia – 2. Algeria – 3. Azerbaijan- 4. Bahrain – 5. Brazil- 6. Cape Verde – 7. Chile- 8. China – 9. Congo – 10. Ivory Coast – 11. Egypt – 12. Spain – 13. Russian Federation – 14. France – 15. Greece – 16. Guatemala – 17. Honduras – 18. India – 19. Islamic Republic of Iran- 20. Italy – 21. Japan – 22. Kenya- 23. Lithuania- 24 Namibia – 25. Peru – 26. Portugal – 27. Republic of Korea – 28. Romania- 29. Senegal – 30. Seychelles – 31. Thailand – 32. Tunisia – 33. Turkey – arụ ọrụ n’ezi okwukwe na n’okpuru iwu siri ike setịpụrụ. mgbe ịtụ vootu na Jenụwarị.
N'okpuru iwu ndị dị ugbu a, nkwenye nke nkwenye a dị mkpa na 2/3 nke ọtụtụ Mgbakọ Ọgbakọ na-abịa.
Onye odeakwụkwọ ukwu UNWTO Zurab Pololikashvili tinyere Council Council na ebe ahụ, na-ewepụta oge dị mkpirikpi maka nzukọ ntuli aka. Ekpebiri nke a na nzukọ nke Council Executive na obodo onye odeakwụkwọ ukwu, Georgia n'afọ gara aga. Nke a welitere nku anya ọzọ n'oge ahụ.
Onye-Nwe-Ọha l'ekfu Chileke l'a-chịta ndu ono 112th. Executive Council mgbe e mere mkpebi a na September afọ gara aga na Georgia.
Ọgbakọ kansụl ndị isi anaghị eme na obodo onye odeakwụkwọ ukwu.
N'oge ahụ Hon. Najib Balala bụ onye Kenya na-elekọta ya. Ọ bụghị ihe nzuzo iche na Balala n'oge a na-akwado odeakwụkwọ ukwu na nkwenye ya n'izu na-abịa.
N'ihi mmegharị a, naanị otu onye ndoro-ndoro ochichi si Bahrain jisiri ike banye n'ọsọ ahụ na-enweghị ohere ọ bụla ịme mkpọsa n'oge mkpọchi ụwa nke Coronavirus. Ọ nweghị ohere ọ bụla, yana mmadụ isii ndị ọzọ na-aga ime enweghị ike iwepụta akwụkwọ ngwa ngwa n'ime oge dị mkpụmkpụ, yana n'oge mmụba na COVID-6 ịbanye n'ọsọ ahụ. Nke a gụnyere onye isi oche WTN na onye bụbu onye isi oche ndị njem nlegharị anya Nepal Deepak Joshi.
Ọ bụrụ na enwere ọkpụkpụ nke ziri ezi na òtù odeakwụkwọ ukwu, ọ ga-arịọrịrị ka ịgbatị usoro ntuli aka gafere May. Kama nke ahụ, ọ kpara mkpamkpa maka oge dị mkpirikpi maka Council Executive ka ọ zute ọzọ wee votu maka ya. Ọ ga-abụrịrị na o kwenyesiri ike na ọ gaghị eche asọmpi siri ike ihu na Jenụwarị - ma ọ meghị.
Ozugbo e kpochapụrụ ihe mbụ mere ị ga-eji mee ntuli aka site na May ruo Jenụwarị, ya bụ ihe ngosi ahia ahia FITUR, odeakwụkwọ ukwu ka leghaara anya. arịrịọ ọbụlagodi mgbe ndị odeakwụkwọ ukwu abụọ nataburu akwụkwọ ozi mepere emepe, site n'aka ndị isi nke gụnyere aha dịka Carlos Voegeler, Prọfesọ Geoffrey Lipman, Louis D'Amore na ndị ọzọ. Akwụkwọ ozi ahụ gbara onye odeakwụkwọ ukwu ume ka ọ gaa n'ihu na nhoputa ndi ochichi nke Executive Council ruo n'ụbọchị mbụ ma ọ bụ karịa.
Onye odeakwụkwọ ukwu maara nke ọma na inyekwu oge ga-emeghela ala maka asọmpi. Kama, o tinyere mgbalị ya niile na-eduga na nnọkọ Council Council nke Jenụwarị iji gboo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị mba ndị isi oche, na-ahapụ ndị otu UNWTO ndị ọzọ na ọgba aghara corona, chọrọ nkwado na mpaghara nkeonwe, kpọmkwem WTTC n'akụkụ.
Mgbe onye isi ala Georgia kwadoro nri abalị na Madrid n'abalị tupu ntuli aka ahụ, onye na-eme ntuli aka Bahrain anọghị na mkpesa.
N'ụzọ doro anya, mmegharị a ejirila usoro ziri ezi, mana ihe ndị a niile nwere ike ịbụ n'ime usoro iwu na atumatu. N'ezie, etinyere ụkpụrụ na amụma ndị dị otú ahụ mgbe ụwa amaghị maka Coronavirus.
Dị ka Honorary kọwara. Onye odeakwụkwọ ukwu Francesco Frangialli na hbụ akwụkwọ ozi mepere emepe ebipụtara naanị izu a, iwu ezughị oke.
N'ịgbanwe usoro a, ị nwere ike ịbụ ma iwu na omume rụrụ arụ.
Usoro ntuli aka nwere ike ịbụ n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ iwu, mana n'otu oge ahụ ezighi ezi na enweghị nha. Na njedebe nke ụbọchị, usoro ahụ agaghị abụ ụkpụrụ.
Dị ka Sophocles dere: "e nwere ihe karịrị nke ọbụna ikpe ziri ezi na-aghọ na-ezighị ezi".
Akwụkwọ ozi nke abụọ mepere emepe nke onye odeakwụkwọ mbụ gosipụtara - ndị isi n'ihe gbasara nchọpụta nke kọmitii ụkpụrụ omume, na nchọpụta onwe ya kwesịrị ịbụ ihe kpatara onye ọ bụla nwere ezi uche ji kwuo "Chere otu nkeji"
Ọtụtụ eziokwu ndị Council Executive amaghị mgbe ha na-eme ntuli aka maka Zurab Pololikashvili
Eziokwu ahụ bụ na okwu dị egwu na nkatọ onye ọrụ ụkpụrụ omume n'ime akụkọ ya na Nzukọ Mgbakọ, na ọtụtụ ndị bụbu ndị ọrụ UNWTO dị elu na-ebute ụzọ wee dee akwụkwọ ozi mepere emepe degara mba ndị otu na-egosi n'ụzọ doro anya na ọ nwere ihe na-ezighi ezi na UNWTO.
Ịghọta aghụghọ, mkparị ndị ọrụ, eziokwu ahụ bụ na a naghị ekwe ka nkatọ na UNWTO pụta ìhè mgbe akụkọ Commission Ethics Commission gasịrị.
Ndị Council Executive amaghị akụkọ a mgbe ha na-eme ntuli aka maka Zurab:
Paragraf a dị na akụkọ ụkpụrụ omume chịkọtara ya:
N'ihe karịrị afọ 35 nke ọrụ n'okpuru ndị odeakwụkwọ izugbe isii nke Òtù ahụ, nke ihe karịrị afọ 20 bụ nke a raara nye ụkpụrụ omume na ọrụ mmekọrịta ọha na eze, onye na-ahụ maka ụkpụrụ omume nke ime bụ ugbu a onye ọrụ na-arụ ọrụ kachasị ogologo na United States. nzukọ ahụ.
N'ihi nke a, enwere m ike ịhụ na nchegbu na-arịwanye elu na mwute na omume ime ụlọ doro anya nke dị na ọchịchị ndị gara aga, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihe gbasara nkwalite, nhazi ọkwa ọkwa na nhọpụta, kwụsịrị na mberede, na-ahapụ ohere zuru oke maka ya. opacity na maka njikwa aka ike.
Eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị otu Executive Council na-akwado akwụkwọ ozi nke abụọ bụbu Secretary General n'ihu ọha na n'azụ ọnọdụ kwesịrị inye ihe mere mba ọ bụla na-asọpụrụ nchọta nke Ethics Commission iji kwuo:
Chere obere oge…
… ma kwe ka anya nke abụọ wee mata mgbanwe dị egwu nke mere n'etiti oge ndị isi oche kwadoro Zurab na Jenụwarị, na ọnọdụ UNWTO na-eche ihu taa.
Dị ka Francesco Frangialli kwuru nke ọma olileanya ya bụ, na General Assembly, n'ikike ya nke "akụkụ kachasị elu" nke UNWTO, ga-eme ihe dị mkpa iji hụ na ntuli aka ziri ezi na Madrid na ịlaghachi na njikwa ọma nke Òtù ahụ.
Akwụkwọ ozi ezigara na Nọvemba 24 nke onye isi UNWTO Executive Council zukọrọ na Jenụwarị 2021 kwuru:
Ezigbo ndị otu mba,
Usoro nhoputa ndi ochichi n'etiti ndi ochichi nke Bahrain na Georgia gosiputara, nke emere n'oge 113th nnọkọ nke Executive Council, na-agbaso isi ihe niile na ụkpụrụ, na usoro nke Executive Council guzobere na akwụkwọ CE / 112/6 rev. .1, yana usoro iwu nke Council Executive yana na iwu izugbe maka ntuli aka site na ntuli aka nzuzo nke UNWTO.
Na nhoputa ndi ochichi, nke ndi otu ndi isi ochichi mere site na nhoputa ndi ochichi nke ndi isi ochichi kwadoro nke oma site n'igosi nzere bara uru nke ndi ochichi nke ha nyere, ndi mmadu iri ato na ato n'ime ndi isi ochichi iri ato na ano no na nzuko ahu, nke edeputara n'elu.
N'ikpeazụ, n'oge nnọkọ nke 113 nke Council Executive, òtù ahụ kpebiri ịkwado Mr. Zurab Pololikashvili ka ọ bụrụ odeakwụkwọ ukwu nke Òtù maka oge site na 1 Jenụwarị 2022 ruo 31 December 2025, na ndabere nke ndụmọdụ ahụ pụta na nzuzo. vootu n'etiti Oriakụ Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Onye ochichi nke alaeze Bahrain, onye natara 8 votes, na Mr. Zurab Pololikashvili, Candidate nke State nke Georgia, onye natara 25 votes.
Maka ihe niile dị n'elu na n'ikike m dị ka Onye isi oche nke Executive Council, a na m akwado na n'oge onye isi ala a, emezigharịrị omume niile a na-eme n'usoro iwu na iwu ugbu a, bụ ntuli aka nke Council Council mere na nzukọ ya gara aga bụ usoro. jikọtara na ụkpụrụ.
N'ihi ihe ndị a dị n'elu, na ịkwanyere nsonaazụ nke votu e mere na nnọkọ nke 113 nke Council Executive, m na-ekwughachi na Council Executive of the World Tourism Organisation, na-agbaso usoro nke Nkeji edemede 22 nke Iwu na Nkeji edemede 29 nke Iwu nke Usoro nke Executive Council, na-atụ aro ka General Assembly Mr. Zurab Pololikashvili dị ka Secretary-General maka oge 2022-2025.
Na-enweghị ihe ọzọ, a na m akọwa nlebara anya na nkwanye ùgwù m kachasị elu.
Onye isi oche UNWTO Executive Council,
José Luis Uriarte Campos bụ onye ọka iwu sitere na Universidad de Los Andes yana nzere masta na amụma ọha sitere na Universidad del Desarrollo.
N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ahụmahụ, ọ nwere ọrụ a ma ama na ọha mmadụ, na-egosipụta ọrụ ya dị ka onye isi ndị ndụmọdụ na Ministry of Economy, Development, and Tourism; onye isi mpaghara na Ministry of Public Works na National Director nke Sercotec.
Na 2014 ọ jere ozi dị ka odeakwụkwọ ukwu nke National Chamber of Commerce, Services and Tourism, na-akọwapụta atụmatụ ọrụ ọhụrụ na nkwado maka ngalaba ahụ.
Taa ọ na-arụ ọrụ dị ka Undersecretary nke njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ dabere na Ministry of Economy, Development, and Tourism.
Ọ ga-kwuru, na dị ka a pụrụ ịdabere na eTN isi mmalite akwụkwọ ozi a e dere site Alicia Gomez, ndị ọkàiwu ndụmọdụ UNWTO, na nyere ndị ozi na Chile banye.
Ndị nnọchiteanya UNWTO kwesịrị ime ihe n'ụzọ ziri ezi ma nyochaa eziokwu niile. Ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa nke njem nleta ga-adị ndụ 4 afọ na ya pụta.